Horudhac: Manchester City vs Newcastle United… (Wax weliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Etihad) – Gool FM
Haaruun July 8, 2020
(Manchester) 08 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa caawa oo Arbacada martigelin doonta Naadiga Newcastle United, iyagoo raadinaya inay guul gaaraan si ay xaqiijisataan booska labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Magpies kooxda lagu naynaaso ayaa u safreysa garoonka Etihad, iyagoo isku diyaarinaya inay guul ku soo gaarto si ay sare ugu qaado rajadeeda kaalimaha sare ee horyaalka Premier League.
Taariikhda: Arbaco 08 Luulyo 2020
Kooxda Manchester City ayaan qabin wax walwal dhaawacyo cusub ah.
Gabriel Jesus ayaa laga yaabaa inuu markale u ciyaaro booska uu ka dhaawacmay Sergio Aguero, iyadoo tababare Pep Guardiola uu ku adkeystay in xiddiga reer Brazil uu soo saaray, mid ka mid ah qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan kulankii ay wajaheen Southampton.
Newcastle ayaa qabta dhaawacyo cusub, iyadoo Miguel Almiron iyo Allan Saint-Maximin ay labadaba uu shaki ku jiro kulankan.
Andy Carroll iyo Jamaal Lascelles ayaa iyagana ah kuwa ku maqnaanaya dhaawacyo gumaarka iyo canqowga ah.
>- Kooxda Man City ayaa guuleysatay tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka kula ciyaareen Newcastle, waxaana ay gaari karaan guushoodii 11-aad oo ay ka gaaraan hal koox ciyaaraha sare ee horyaalka.
>- Newcastle ayaa guuldarro la’aan ah labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, waxa ay guuleysatay hal kulan, waxaana ay barbaro gashay kulan kale.
>- Man City ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ay ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana ay cel-celis ahaan dhalisay 14-0.
>- Waxay lumiyeen 33 dhibcood xilli ciyaareedkan – marka la barbar dhigo wadarta 30 ka mid ah labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
>- Man City ayaa shabaqeeda gool ka ilaashan karta marka ay garoonkeeda ku ciyaareyso shan kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii September sanadkii 2011-kii.
>- Yeelkeede, waxa ay khasaaro la kulmeen afar ka mid ah sagaalkoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeleen ciyaaraha sare ee horyaalka.
>- Man City ayaa ku guuleysan karta inay gool dhalin weyso kulamo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso sanadkii 2016-kii.
>- Kevin de Bruyne ayaa gool dhalinayay ama caawinayey 15 mar 14-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ku soo bilowday safka hore horyaalka Premier League.
>- Newcastle ayaa hadda guuldarro la’aan ah lix kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, waxa ay guuleysteen saddex kulan, halka ay barbaro galeen saddex kulan oo kale, kaliya Manchester United oo sagaal kulan oo xiriir ah guuldarro la’aan ah ayaana haatan ka badan.
>- Magpies ayaa guuleysan karta saddex kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League marka ay ku ciyaareyso meel ka baxsan garoonkeeda markii ugu horreysay tan iyo bishii December sanadkii 2001.
>- Waxa ay dhalieyen 10 gool afartoodii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, halka 10 gool ay ku qaadatay inay dhaliyaan 14-kii kulan ee markaas ka horreysay.
>- Tababare Steve Bruce ayaan weli Manchester City garoonkeeda ku soo garaacin kulan ka tirsan Premier League oo uu boqoday isagoo tababare ah, waxa uu barbaro la soo galay saddex kulan, halka siddeed kale uu khasaaro kala soo kulmay.
>- Gool uu dhaliyey labadiisii kulan ee ugu dambeeyey Miguel Almiron waxa uu ku barbareeyey goolashii uu dhaliyey 40-kiisii kulan ee ugu horreysay Premier League.
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Liverpool... (Kooxda Reds oo caawa sameyn karta rikoor aan loo baahnayn!)